Muwaadiniin Turki ah oo la afuubtay oo haatan la sii daayey - BBC News Somali
Muwaadiniin Turki ah oo la afuubtay oo haatan la sii daayey
Sida ay booliisku sheegeen afar muwaadin oo Turkiga u dhashay ayaa la soo badbaadiyey toddobaad kaddib markii rag hubaysani ay ku afduubteen gobolka Galbeedka Nigeria kuyaal ee Kwara.
Afar taan qof, oo ahaa shaqaale dhismaha ka shaqeeya, ayaa toddobaadkii hore laga afduubtay baar ku yaal dalkaas.
Dadka wax afduubtay ayaa dalbaday $1 milyan oo dollar oo madax furasho ah balse booliiska ayaa sheegaya in wax lacag ah aan la bixin shuruud la'aanna dadkaas lagu sii daayey.
Afduubka madax furashada lagu raadiyo ayaa caan ka ah Nigeria, waxaana marar badan la bartilmaameedsaday dad reer Nigeria ah iyo ajaanib badan oo magac leh.
Labo toddobaad ka hor, budhcad badeed ayaa weerar ku qaaday markab xamuul siday oo marayey xeebaha Nigeria waxayna afduubteen 10 bad maaxe oo Turkiga u dhashay. Walina lama oga halka ay ku dambeeyeen.
Erdogan "Haddii Maraykanka haysto iPhone, Samsung ayaan heli karnaa"
Mudaaharaadyo ruxay caasimada Turkiga
Xaaladda degdegga ah ee Turkiga oo la kordhiyay
Shaqaalahan dhismaha ka shaqeeya ee Turkiga u dhashay ayaa Jimcihii laga helay kayn ku taal gobolka Kwara, sidaas waxaa BBC-da u sheegay sarkaal booliiska ka tirsan oo lagu magacaabo Kayode Egbetokun.
Hawlgalka dadkan lagu soo badbaadinayey ayaa waxa qaaday boliiska gobolkaas, dambi baare yaal iyo koox saraakiil ah oo laga soo diray caasimadda dalkaas ee Abuja.
Mr Egbetoku ayaa sheegay in saddex ka mid ahaa afduubeyaasha oo la xiray hawgalka ka hor ay gacan ka siisay sidii dadkan loo soo badbaadin lahaa.
"Xadhiga raggan ayaa keenay cadaadis ah in kooxaha wax afduubtay ay shuruud la'aan ku sii daayaan dadka Turkiga u dhashay ee ay haysteen," ayuu yidhi, asagoo intaas ku daray in booliisku ay ku raad joogaan budhcadda inteedii kale.
Afartan muwaadin ee Turkiga ah ayaa baadhitaan caafimaad loo kexeeyey kaddib markii la soo daayey.
Safiirka Turkiga u jooga dalka Nigeria Melih Ulueren ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in mushkiladdaasi ay dhammaatay wuxuuna u mahad caliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay hawgalkaas.